नक्शा सर्वरमा निर्णय गर्दै - जिओफुमाडास
अगस्त, 2010 cadastre, जियोस्पाटियल - जीआईएस, मितोल्ड GIS, Microstation-बेन्टले, qgis
क्याडस्ट्रल संस्थासँग हालसालै गरिएको कुराकानीको फाइदा उठाउँदै यसका नक्सालाई के प्रकाशित गर्ने भनेर खोजी गर्दै थियो, यहाँ म समुदायमा विषयको उद्धार फिर्ता गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरु संक्षेप गर्छु। सायद यो समयमा यो निर्णय गर्न वा जियोफुमदा मद्दतको लागि सोध्ने कसैको सेवा गर्दछ।
किन नक्सा सर्भर
परिदृश्य कसैको थियो, जो जियोवेब प्रकाशक, बेन्टले द्वारा जाने उद्देश्य थियो, किनकि उसले अझै पनि इजाजत पत्र पाएको थियो डिस्कवर सर्भर, यसका पुर्खा, धूल वर्षमा। बेन्टले मा रुचि राख्नुको अर्को कारण यो हो कि उनीहरूको म्यापिंग माइक्रोस्टेशन भौगोलिक विज्ञानमा रहेको छ, क्यानास्ट्राल नक्साको निर्माण र रखरखावको लागि VBA अनुप्रयोगहरू।
अघिल्लो ब्लगमा (Ugly - दुर्लभ जस्तै साथी भन्छन्) एक वेब नक्शा सेवा कसरि बनाउन को लागि दिखाया, मनिफल्ड प्रयोग गर्दै GIS, कम लागत विकल्पको रूपमा। मैले यसका फाइदाहरूको बारेमा पनि एक दिन कुरा गरें Geoweb प्रकाशक समाधानको रूपमा बेन्टलेबाट जब त्यहाँ अधिक चाँदी हुन्छ। यो जुन पुरानो पोष्टमा निरन्तरता दिन मैले तुलना गरे अनलाइन नक्सा प्रकाशनका लागि विभिन्न अनुप्रयोगहरू बीच।
कुराकानी पछि हामीले नक्शा सर्भरमा जाने निर्णय गर्यौं जुन एक विषय हो जुन म आगामी केही दिनमा शोषण गर्ने आशा गर्दछु। खैर, वर्षको बाँकीको लागि अन्य खुला स्रोत प्लेटफर्महरू परीक्षण सुरू गर्नुहोस्, तर वेब वातावरणमा।
नक्शा सर्वर एक जीआईएस अनुप्रयोग हैन, यो जस्तो ढोंग पनि गर्दैन, किनकि यसको पृष्ठले भन्छ। यो मिनेसोटा विश्वविद्यालयको पहलको रूपमा जन्म भएको हो, यसैले यसको लोगो मिनेसोटा र मिसिसिपी नदीहरूको संगमबाट आउँदछ। आज यो व्यापक रूपमा वितरित वेब नक्सा सेवामा बेन्चमार्क हो, सायद यसको ए Anglo्ग्लो-सेक्सन मूलको कारण। यस अनुप्रयोगको रूपमा त्यहाँ विस्तृत दायरा छ -very wide really-, मलाई यसको सादगी, नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि सरल छ। सबै जादू को QPis जस्ता कार्यक्रमहरूबाट उत्पन्न हुन सक्छ वा PHP, Java, Perl, Python, Ruby वा C # भाषाहरूको शोषण गर्न तर्कलाई तर्क गर्न सकिन्छ।
MapServer मा थप अनुप्रयोगहरू विकसित गरिएका छन् "सेवा गरे"जस्तो कि चमेलियोन, कार्टोभ, का-नक्शा र Pmapper। यी कोडको कम कमाण्डको साथ प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ, यद्यपि यो मानचित्र सर्वरको आदिम तर्क बुझ्नको लागि उपयुक्त छ।
देखाइएको उदाहरण त्यो हो, केवल कामको एक उदाहरण अब हामी गर्दैछौं। तिनीहरूको अनुमति र सचेतताको साथ यो सेवा सार्वजनिक रूपमा केही हप्तामा उपलब्ध हुनेछ र उनीहरूले यसलाई काम गरेको देख्न सक्दछन्।
त्यो अन्य वेब अनुप्रयोगहरू अवस्थित छन्
यसको लागि, म फाउण्डेशनलाई सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नेछु ओएसगियो, जुन भू-स्थानिक क्षेत्रमा खुला स्रोतको स्थायित्व र मानकीकरणको हिसाबमा सबैभन्दा रचनात्मक पहलहरू मध्ये एक हो। यद्यपि म स्वीकार गर्दछु कि अरुहरु पनि छन्।
नक्साबन्डर, एकदम लोकप्रिय, IDE ग्वाटेमाला को मामला मा नक्शा सर्वरको साथ पातलो ग्राहकको रूपमा प्रयोग। यसको अपीलको कारण यो हो कि यो PHP र जाभास्क्रिप्टको लागि विकसित गरिएको थियो, जुन आज वेबमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने संयोजनहरूको छ।
नक्साबिल्डर, जुन आयो यसको अन्त संस्करण १. 1.5 मा र खुला तहहरूमा मर्ज गरियो। AJAX कुरा ... यो एक सुन्दरता थियो।
खुला तहहरू, यदि तपाई Google वा याहू नक्साको साथ एकीकृत गर्न चाहानुहुन्छ वा रास्टर परिनियोजनमा क्यास सुधार गर्नुहोस्।
म्याग्वेइड ओपनस्रोत, AutoDesk सँग यसको सम्बन्धको लागि धेरै लोकप्रिय। को लागी मर्न को लागी, तपाईले चाहानु भएको स्वादमा।
डिग्री, मापदण्ड मा धेरै धुवाँ। युरोपमा धेरै सम्भावनाको साथ। GML समर्थनमा यसको स्थिरताको कारण, यो पहलमा वेब प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयनको लागि तटस्थ विकल्पको रूपमा सुझाव दिइन्छ। इन्स्पियर.
ओएसजीईको इन्सुलेशनमा अन्य समाधानहरू:
Geoserver, यसको सबैभन्दा ठूलो क्षमता यो विकास Java को बारेमा हो। ArcGIS सहित Google नक्सा, गुगल अर्थ, याहू नक्सा, एकीकृत गर्दा खुल्ला लेयरहरूको रूपमा धेरै प्रस्ताव गर्न।
Geomajas जसमा पतली क्लाइन्ट, डेस्कटप र वेब समावेश छ।
नक्शाफिश, एक प्राथमिकता प्याट तिर तिर फोकस तर सम्भवतः कम से कम एक दस्तावेज (अनलाइन)।
नक्शा सर्भर फायदे
संगतता मानक संग ओजीसी। सायद सर्वोत्तम, हुनत यो लगभग सबै खुला स्रोत अनुप्रयोगहरू राम्रो छन्, कम से कम WMS, WFS, WCS, GML को सन्दर्भमा।
वेब नक्शा सेवा (ओजीसी: WMS) 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0 र 1.1.1
वेब फीचर सेवा (ओजीसी: WFS) 1.0.0, 1.1.0
वेब कवरेज सेवा (ओजीसी: WCS) 1.0.0, 1.1.0
भूगोल मार्कअप भाषा (ओजीसी: जीएमएल) 2.1.2, 3.1.0 स्तर0प्रोफाइल
वेब नक्शा सन्दर्भ कागजात (OGC: WMC) 1.0.0, 1.1.0
स्टाइल गरिएको लेयर डिस्पेक्टर (ओजीसी: एसएलडी) 1.0.0
फिल्टर इन्कोडिङ विशिष्टता (OGC: FES) 1.0.0
सेंसर अवलोकन सेवा (ओजीसी: एसओएस) 1.0.0
अवलोकन र माप (ओजीसी: ओएम) 1.0.0
SWE सामान्य (OGC: SWE) 1.0.1
OWS सामान्य (OGC: OWS) 1.0.0, 1.1.0
ओपन जीस कन्सोर्टियम दिशानिर्देशहरूको मार्फत डेटा सेवा दिनाले कुनै पनि कार्यक्रम धेरै अवरोध बिना यसलाई टाँसिनेछ। AutoDesk Civil3D, ArcGIS बाट। बेंटले नक्शा, gvSIG, QGis, आदि। पनी Google Earth / wms मार्फत नक्शा।
यसलाई पहिलेको साथ काम गरेको अनुप्रयोगहरूसँग तुलना गर्नुहोस् (जियोवेब प्रकाशक र मनिफल्ड जीआईएस), नक्सा सर्भरले तिनीहरूलाई पार गरेर पार गर्यो धेरै प्रसारनतिजाको रूपमा, तपाईंको पृष्ठसँग पर्याप्त जानकारी छ, विकसित उदाहरणहरू, प्रयोगकर्ता समुदायलाई उल्लेख नगरी। GWP को मामला मा तपाईं आफ्नो न nails संग धेरै काम गर्न छ र स्पेनी मा मनिफोल्ड के केहि कम छ -बाहिर निस्कनु Geofumadas यसैले विरोधाभासमा प्रवेश नगर्नुहोस्-.
El डेटा समर्थन यो अचम्मको कुरा हो। यो स्वर्ग होइन तर यति नजिक छ:
भेक्टर वा जियोडाट डाटा डाटा: फाईलहरू आकार, GML, PostGIS र एक अधिक विश्व OGR मार्फत, DGN सहित।
रास्टर डाटा: georeferencesd Tif र हामी केहि GDAL मार्फत चाहान्छौं।
निर्गतबाट, तपाईं jpg, png, pdf र निश्चित रूपमा OGC स्तरहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि त्यहाँ छ गुणक समर्थन। नक्सा सर्भर IIS को शीर्षमा चल्छ, जसले विन्डोज / पीसी प्रयोगकर्ताहरूको लागि मैत्री बनाउँछ। अपाचेमा पनि, जुन यो विन्डोज र लिनक्समा आश्चर्यजनक रूपमा चल्दछ, डेटा प्रदान गर्न मात्र नेभिगेट गर्नका लागि। मनिफोलको मामलामा
d, प्रकाशन मात्र IIS, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई Apache को बारे मा कुरा गर्नुहुन्छ यो भित्री हिट हिट, यद्यपि त्यहाँ छन् जसले आफ्नो बनाएको छ pirouettes। र बेंटलेको मामलामा, विन्डोज मात्र, वेब प्रदर्शन पनि एक एक्टिभ एक्स हो जुन केवल इन्टरनेट एक्सप्लोररमा चल्दछ, यो धुम्रपान नगरेसम्म IDPR स्पेस कारतूस मा शानदार।
भन्न आवश्यक छैन, यसले सम्झौता गर्दैन लाइसेन्सको लागि तिर्नुहोस्। मनिफोल्ड युनिभर्सलसँग इजाजतपत्र $ of०० को क्रममा हुन्छ, बेंटले GWPublisher को १०,००० अमेरिकी डलर सीमित उपयोगकर्ताहरूसँग र यदि यो १IS,००० अमेरिकी डलरको जीआईएस सर्भरको लागि हो भने।
अन्तमा, मैले ठूलो लाभ देख्छु विकास। कसैलाई नक्शा सर्वरमा काम गर्ने पत्ता लगाउन त्यति सजिलो हुँदैन, तर यो अन्य अनुप्रयोगहरू भन्दा धेरै सजिलो छ, रिमोट रूपमा हामी हाल गरिरहेका छौं। एक बिकासकर्ता जसले बन्टले GWPublisher को हिम्मत जान्दछन् पत्ता लगाउन त्यति सजिलो छैन, उनले बन्टले जियोस्पाटियल सर्भरमा बलियो विकासको फाइदा लिन प्रोजेक्ट वाइज, भौगोलिक, माइक्रोस्टेशन VBA र बेंटले नक्शा जान्नुपर्दछ (यद्यपि म स्वीकार गर्दछु कि त्यहाँ त्यहाँ अद्भुत चीजहरू छन्)। एक मैनिफोल्ड जीआईएस विकासकर्ता, धेरै गाह्रो भए यद्यपि यो केवल .NET मात्र हो, र GIS सर्भरबाट एक, निश्चित रूपमा लाईसेन्सको लायक कति मूल्यमा आधारमा शुल्क लिनेछ।
यसलाई कसरी5चरणहरूमा स्थापना गर्ने
त्यहाँ धेरै चरणहरू छैनन्, साथै उत्पत्तिको सुरुआत:
OSGEO4W डाउनलोड गर्नुहोस् यहाँ देखि
यसलाई स्थापना गर्नुहोस्, न्यूनतम MapServer, Apache र एक उदाहरण।
Apache स्थापना गर्नुहोस् र सेवा सिर्जना गर्नुहोस् (वा IIS मार्फत डाइरेक्टरी लिफ्ट गर्नुहोस्)।
सेवा लिफ्ट गर्नुहोस्
ब्राउजरमा उदाहरण चलाउनुहोस्
हो, उत्पत्ति जस्तै पद १ र २ को बीचमा शैतानको विद्रोहमा घटेका थुप्रै कुराहरू छन्। सामान्यतया या त http: // लोकलहोस्ट / मार्फत सेवा माथि उठाउँदै छ वा तपाइँको लडाईमा कब्जा गर्दछ, तर तपाइँ सिक्नुहुन्छ।
यो अर्कोमा हुनेछ जुन हामी यो व्याख्या गर्नेछौं।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो के हामी कुल रोबोट स्टेशन पर कब्जा गर्छौं?
अर्को पोस्ट सुझावहरू: कसरी लेख लेख्न सुरु गर्नुहोस्अर्को »
Rep जवाफ "नक्सा सर्भरमा निर्णय गर्दै"
नमस्ते युलिसेस। एक दिन तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ कि तपाईंले # # मा गरेको धुवाँको बारेमा, जुन वेबमा मैले थोरै देखेको छु।
eulises damian cruz gomez भन्छिन्:
किन यो तीव्र र sql सर्भर 2008 सँग वा पहिले नै posgrest र प्रकाशन आकार प्रकार नक्सासँग र यसैले तपाईं डोमेन मुद्दाबाट टाढा राख्नु हुन्छ र तपाई केवल asp.net सँग सर्भरको खोजी गर्नुहुन्छ
खुला स्रोत Mapguide को साथ कुनै अनुभव ?? मैले यसलाई लामो समयको लागि स्थापना गरें, तर जब म मास्टर सुरू गर्छु यसले सर्भरमा मलाई एक कनेक्शन त्रुटि फ्याँक्छ ... स्पेनिशमा ट्यूटोरियल एकदम उपयोगी हुन्छ। अभिवादन, धन्यवाद =)
नकारात्मक, तपाईलाई Google खोज इञ्जिनको साथ लडाई गर्नु पर्छ।
नमस्कार, म नक्साभरमा धेरै चासो राख्छु, केहि चीजहरू जसलाई मैले एकसाथ राख्ने मौका पाउँथेँ, यस पङ्क्तिमा मैले रेलको भित्र नक्सा अनुप्रयोग विकास गर्न समर्पित छु, तपाईंसँग कुनै विचार छ कि कसरी? वा केहि मद्दत लिङ्क .. धेरै धेरै धन्यवाद
तपाईंले कम्पनीको खोजी गर्नु पर्ने छ जुन सेवामा समावेश नक्सा स्क्रिप्टसँग होस्टिंग प्रदान गर्दछ।
इन्ट्रानेट स्तरबाट सेवा गर्न यो एकदम सजिलो छ, किनकि केवल मेशिनको आईपी (सेवाको साथमा 192.168.0.129) सँग मात्र अन्य कम्प्यूटरबाट एकै सञ्जाल वा काम समूह भित्र पहुँच गर्न सकिन्छ।
यदि तपाइँ यसलाई इन्टरनेटमा सेवा दिन चाहानुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् जुन सर्भरको रूपमा काम गर्ने मेसिनसँग बढी वा कम सभ्य इन्टर्नेट जडान छ, र एक सार्वजनिक आईपी पनि (80.26.128.194) प्रयोग हुन्छ। कारण यो हो कि आईपीले उपकरणहरू लिन्छ जब इन्टरनेटमा जडान गर्दा इन्टरनेट सेवा द्वारा प्रदान गरिएको हो, यो सार्वजनिक हो, यद्यपि यो पहुँच छ हरेक चोटि परिवर्तन हुन्छ र सावधान हुन्छ कि यो ठीक छ, यस कारणले तिर्नु पर्ने हुन्छ।
यदि तपाईं आईपी नम्बरमा पहुँच अघि चाहनुहुन्न अघिल्लो एक, तपाइँ डोमेन र DNS सेवाको लागि तिर्नुहुन्छ, जसको साथ तपाइँसँग सजिलो ठेगाना हुन सक्छ http://www.eldominio.com। तपाईं सबडोमेन वा सेवाहरूको साथ पुनःनिर्देशन गर्न सक्नुहुनेछ जुन पृष्ठहरू प्रस्ताव गर्दछ http://www.no-ip.com
मार्टीनो काबाना भन्छिन्:
बधाई छ कि मैले अब केहि समयको लागि गरिरहेको ब्लगको लागि। यद्यपि म जीवविज्ञ हुँ, म GIS समस्याहरूमा काम गर्छु। पछिल्लो वर्ष मैले MapServer बिट प्रयोग गर्न सिके र यो राम्रो छ। तर मेरो प्रश्न छ कि मैले अझै सम्म जवाफ पाएको छैन। होस्टिङ कम्पनीले नक्सासर्भर भण्डार गर्दछ? तपाईले तपाइँको कम्प्यूटरको प्रयोग गर्न र तपाईंको गृह ईन्टरनेट सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्दछ?
म यस कार्यक्रमको साथ केहि अन्य परियोजना गर्न चाहन्छु तर मेरो नेटवर्कमा फाँट गर्ने कुनै उपाय छैन।
यदि कसैलाई थाहा छ भने जवाफ धेरै राम्रो प्राप्त हुनेछ।